[Eng Sub] NOT ME เขา...ไม่ใช่ผม | EP.1 [2/4] - MY - Stindx.com
Number of symbols: 3260
ဆရာစစ်ကြည့်ပြီးပြီနော် ဘာမှ ပုံမှန်မဟုတ်တာမတွေ့ပါဘူး သူ ရာသီဥတုနဲ့ ရင်းနှီးမှု မရှိသေးလို့လားဗျ အခုမှ Russia ကပြန်လာတာဆိုတော့ ဆိုင်တော့မဆိုင်လောက်ဘူးဗျ မနက်ဖြန် ဆရာ နောက်တစ်ခါ သေချာပြန်စစ်ပေးမယ် ဘယ်လိုနေလဲ White ကျွန်တော် သက်သာနေပါပြီဗျ ဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူး နေနေရင်းနဲ့ အသက်ရှူလို့သိပ်မရဘူး ဒါဆိုလည်း ဆရာဝန်ကို တစ်ရက်လောက်အခြေအနေထပ်ကြည့်ခိုင်းကြတာပေါ့ ဟုတ်ကဲ့ ဟဲလို White ဟဲလို Todd လား အင်း ငါပါ ငါ့ကိုမှတ်မိတယ်မလား အင်း မှတ်မိတယ် ငါ Ai’Black အကြောင်းပြောမလို့ အခု Ai'Black သေတော့မယ် Ai’Black ဘာဖြစ်တာလဲ ဘယ်သူ သူ့ကိုလုပ်တာလဲ မင်းသူ့ကိုတွေ့ချင်သေးတယ်ဆိုရင် ငါ့ကိုဆေးရုံမှာလာရှာနော် ငါ location ပို့လိုက်မယ် White. Blackကို ICUမှာသွားရှာရအောင် တကယ်လား.. Black အဲ့လောက်တောင်ဖြစ်နေတာလားကွ ငါလည်းမသိဘူး ငါ့ကိုသူလိုက်ခံထိနေတယ်လို့ ဖုန်းဆက်လာတာ လိုက်ခံထိတယ်.. အဲ့ကောင် ဘာသွားလုပ်လာလို့လဲ မင်းသူနဲ့စကားမပြောဖြစ်ဘူးလား
ဟင့်အင်း သူဘာတွေဖြစ်နေတာလဲ လာ မင်း Russia ပြောင်းသွားပြီးကတည်းက သူနဲ့ အမြဲကျောင်းတူတူတက်ခဲ့ကြတာ ဒါပေမဲ့ တက္ကသိုလ်ရောက်ပြီးကတည်းက တက်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ သူ့အမေနဲ့အမြဲရန်ဖြစ်တာ အဲ့ဒါနဲ့ ငါနဲ့လာနေဖို့ ခေါ်ခဲ့တယ် ဒါပေမဲ့ ခုနောက်ပိုင်းသူ့ဆီမှာ သူငယ်ချင်းအသစ်တွေရှိတယ် ကြည့်ရတာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်းတွေမို့လို့ သူတို့ကို အရမ်းမယုံဖို့ သတိပေးလိုက်တယ် ဒါပေမဲ့ အဲ့ကောင်က ငါပြောတာနားမထောင်ဘူး တကယ်တော့ ငါထင်နေတာ မှန်ရဲ့လားဆိုတာ ငါလည်းမသိဘူး ဒါပေမဲ့ ငါယုံကြည်တယ် Ai’Black ကို ဒီလိုဖြစ်အောင်လုပ်တာက သူတို့ပဲဆိုတာ Ai’Black က ငါ့ကိုတစ်ခါကပြောဖူးတယ် တကယ်လို့ သူတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့ရင် ဒီလက်ကိုင်ပုဝါလေး မင်းကိုပေးပေးဖို့ ပေးလိုက်ရင် သူဘာလိုချင်လည်းဆိုတာ မင်းသိလိမ့်မယ်ဆိုပြီး White. ရော့ ပြန်ယူသွား Black သူတို့ကို ပြသနာသွားရှာလာတာလား ဘာပြသနာရှာတာလဲ သူတို့ကပိုက်ဆံအရင်ယူသွားတာလေ ပိုက်ဆံအိတ်ပြန်သွားတောင်းလာပေးတာ သူများတွေအမြတ်ထုတ်တာမခံနဲ့ ငါတို့မချရင် ဘယ်လိုလုပ် နိုင်မှာလဲ ကတိပေးစမ်း နောက်ကျရင် ပြန်ချမယ်လို့ ပြောလေ White! ကတိပေး ပြော White! ကတိပေးတယ် နောက်ကျရင်
တကယ်လို့ လာအနိုင်ကျင့်တဲ့လူရှိရင် ပြန်ချမယ် ဘယ်သူမှအမြတ်ထုတ်တာမခံတော့ဘူး Blackကို လာလုပ်တဲ့လူရှိရင်လည်း Whiteက ကြည့်နေမှာမဟုတ်ဘူး ကျွန်တော် အစ်ကို့အစား အစ်ကို့ဂိုဏ်းထဲဝင်မယ် ပြီးရင် အစ်ကို့ကို နာအောင်လုပ်တဲ့လူကိုရအောင်ရှာမယ် အချိန်တွေက ကျွန်တော်တို့ကိုပြောင်းလဲစေတယ် Black သူ့ဘဝတစ်လျောက်လုံးမှာတွေ့ခဲ့တာတွေ သူနဲ့ကျွန်တော့်ရဲ့ ဘဝလမ်းကြောင်းတွေက ကွာခြားလွန်းတယ် တစ်ချိန်က အားလုံးတူခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်က အခုတော့ အကုန်ကွာခြားနေခဲ့ပြီ ကျွန်တော် Black ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ကို နောက်တစ်ကြိမ် ပြန်တွေ့ရတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော့်ကိုနာကျင်စေတယ် Black အများကြီးကိုကျော်ဖြတ်ခဲ့ရတယ် သူဘယ်လောက်နာကျင်နေမလဲဆိုတာ ကျွန်တော်မသိနိုင်ဘူး ဟိုင်း Black. သွားမယ် Black က ဒီမှာ တစ်ယောက်တည်းနေတာလားကွ အင်း သူ့ဆီမှာရည်းစားရှိပုံလည်းမပေါ်ဘူး B. G. မင်းဒီမှာရှိတဲ့ Black ရဲ့ အင်္ကျီတွေပဲ သုံးထားနှင့်လိုက်နော် တကယ်လို့အသစ်ဝယ်လိုက်ရင် သူများတွေ သံသယဝင်ကုန်မယ် boxers အသစ်လဲရလိမ့်မယ် ဝတ်သာဝတ်လိုက်စမ်းပါ မယားပါဘူး အမြွှာဆိုတော့ ဆိုဒ်လည်းတူတူပဲမလား
ချီးကို ဆိုဒ်တစ်ခုတည်းရမလား ရှက်လို့လား ဒါလေးစတာကို တူတူဝတ်တော့ ပိုပီပြင်တာပေါ့ ဘယ်သူက အတွင်းခံထိကြည့်မှာတဲ့လဲ ဒီမှာလေ brand name ကြီး Ai’Black မဟုတ်ဘူးဆိုတာ ဘယ်လိုကြည့်ကြည့်သိတယ် မင်းသာ လူဖမ်းမိရင် သေပြီနော် အရမ်းများ မနေဘူးလား မများပါဘူးကွ မျက်နှာဒီလာ.. မင်းဒီမှာကြည့်နော် ဒါ Gram! မင်းနဲ့ မေဂျာတစ်ခုတည်း Ai’Black က ကျောင်းတက်နေသေးတာလား အင်း.. အမေနဲ့ရန်ဖြစ်တုန်းက သူတစ်နှစ်အောက်ထားတာ ဒါက Yok အနုပညာဌာနက ဒါက Sean နိုင်ငံရေးသိပ္ပံက ဒီကောင်တွေက အန္တာရယ်အရမ်းများတယ် မင်းသေချာ သတိထားမှဖြစ်မယ် ဒီကောင်တွေ တရားမဝင်တာ တစ်ခုခုနဲ့ရှုပ်ထားသလိုပဲ Black က တရားမဝင်တာတွေနဲ့ တကယ်ဝင်ရှုပ်တယ်တဲ့လား မင်းကြောက်လို့လား မင်းကြောက်ရင်နောက်ဆုတ်လို့ရတယ်နော် မဆုတ်ဘူး ငါ Black ကို လုပ်တဲ့ကောင်ကို ရအောင်ရှာမှ ဖြစ်မယ် ပြီးရင် အကုန်လုံးကိုထောင်ထဲ ဆွဲထည့်ပစ်မယ် စောလာတာပဲ ဒီနေ့ Gram ကျန်တဲ့ကောင်တွေဘယ်ရောက်နေကြတာလဲ ပုံမှန် မင်းဘယ်သူ့အကြောင်းမှ မမေးပါဘူး တည့်ပြော ဒီရက်ပိုင်းမင်းဘယ်တွေရောက်နေတာလဲ